TRF ee saxaafadda 2017 | Abaalmarinta Abaalmarinta | Wargeysyada iyo internetka
Bogga ugu weyn Nagu saabsan TRF ee Saxaafadda 2017
Saxaafaddu waxay soo saartay Hay'adda Reward Foundation waxayna ku faafinaysaa ereyada ku saabsan shaqadayada oo ay ka mid yihiin: fasallada feejignaanta loola jeedo; wacitaanka wax-ku-oolka jinsiga ku salaysan ee dhammaan dugsiyada; u baahan tahay tababbar loogu talagalay bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka NHS ee ku saabsan daroogada foojignaanta iyo ka qayb qaadashada cilmi ku saabsan dhibaatooyinka galmada ee sababa galmada. Boggan wuxuu muujinayaa qaar ka mid ah guulahayaga wargeysyada iyo khadka tooska ah. Waxay ahayd sanadkii noogu fiicnaa.
2 Diseembar 2017 - Adeegga wararka tooska ah ee Croatia. Wareysiga buuxa ee Mary Sharpe waa la heli karaa halkan gudaha Croatian. Google Turjumadu shaqo fiican ayey u geyneysaa Ingiriiska. Mid kale oo ka sii dheer wareysiga ayaa lagu soo bandhigay wargeys todobaadle ah oo ku yaala Glas Koncila on 16 November 2017 waxaana laga arki karaa halkan.
16 Oktoobar 2017 - la soco wareysiga Radio Sputnik
Maqaalka oo dhan ayaa la heli karaa halkan internetka. Goobta barnaamijka TRF ee wareysiga waa halkan waxayna kuu ogolaaneysaa inaad dhageysatid wareysiga nool ee buuxa.
10 Oktoobar 2017 - TRF ee BooliskaProfessional.com, maqaal uu qoray Nick Hudson
9 Oktoobar 2017 - TRF ee wargeyska qaranka
Maqaalka oo dhan ayaa la heli karaa halkan.
Sheekada oo dhan waa la heli karaa halkan.
Wargeyska Ganacsiga ee TRF
4 Oktoobar 2017 - TRF waxay kujirtaa sheekada bogga hore
27 Sebtember 2017 - Hay'adda Reward Foundation waxay ahayd maalgeliyeyaal rasmi ah The Coolidge Effect ee Edinburgh
23 Sebtember 2017 - Hay'adda Reward Foundation waxay ahayd maalgeliyeyaal rasmi ah The Coolidge Effect ee ku yaal Edinburgh
Maqaalka Machadka Machadka ee buuxa waxaa laga heli karaa internetka halkan. Qayb ka mid ah waxay ka muuqatay bogga internetka ee christian-ka jesus.ch sida Pornography ayaa dhiirrigelisa Jugendliche zu sexuellen Straftaten on 13 September 2017.
Scottish Daily Mail, 4 September 2017. Sheekada waxaa sidoo kale laga heli karaa internetka halkan.
Herald, 4 September 2017, Page 12. Waxaa laga heli karaa internetka halkan. Waxaa loo shaqeeyay sida Muuqaalka internetka ayaa lagu eedeeyay kor u kaca ee 18s dambiyada galmada on Aadhu.com isla maalintaas. Nooc luqadda Jarmalka ah ayaa ka soo muuqday websaydhka Austrian 'newszone technology news' sida Schottland gibt Online-Pornos Schuld Sex-Verbrechen.
Sunday Post, 3 September 2017. Sheekada waxaa sidoo kale laga heli karaa internetka halkan. Qaybaha ayaa sidoo kale lagu daabacay daabacadaha Dundee iyo Newcastle.
Sunday Mail, 20 Ogosto 2017. Sheekadan sidoo kale waxaa laga heli karaa khadka tooska ah halkan.
Xarunta 3 March 2017
Nooca wax laga baddelay ee sheekadan Wanaagsan ee Scottish-ka ah waxaa laga arki karaa addictionhelper.com halkan.